Shir-madaxeedka AU oo maanta ka furmaya Kampala - BBC Somali
Shir-madaxeedka AU oo maanta ka furmaya Kampala
25 Luulyo 2010
Madaxda dalalka ururka Midowga Afrika ayaa maanta o axad ah uu uga furmayaa shir-madxeedkoodii magaalada Kampla ee dalka Uganda. Ajandoodyinka ugu waaweyn ee shirkaasina waxa ka mid ah arrimaha Somalia, Darfur, iyo guud ahaan adkaynta qaaradda
Madaxweynaha dalka Uganda, Yuweri Museveni, ayaa isna mar kale ku hanjabay inuu tallaabo adag ka qaadi doono islaamiyiinta Somalia ee sheegtay weerarradii bishan ka dhaca Kamla ee dadka baani ku dhinteen.
Waxa kale oo madaxwene Yoweri Museveni uu kulan la qaatay hoggaamiyayaasha ciidamadiisa, xili ay iyaguna soo ifbaxayaa warar sheegaya in jabhadda ADF ee muslimiinta Uganda iyo kooxaha al-shabaab iyo weliba al-qaeda inuu xidhiidh ka wada dhexeeyo.
Wasiirka Horumarinta Afrika ee dalka Britain oo isna ka qeybgalaya shir madaxeeda Midowga Afrika ayaa taageerey qorshaha ciidan dheeri ah oo nabad ilaalin ah loogu dirayo Somalia.
Madaxda Afrika ka sokow waxaa shirka jooga diblomaasiyiin reer galbeed ah oo uu ka mid yahay Wasiirka Waaxda Horumarinta Afrika Britain, Henry Bellingham, oo ka qeybgalyaasha shirka u xaqiijiyey in dalkiisu taageerayo qorshaha ciidamo dheeri ah loogu dirayo dalka Somalia.
Mareykanka waxaa uu shirka u soo dirsanayaa masuul sare, kaas oo ah Xeer Ilaaliyaha guud ee dalkaasi oo ay wehlin doonaan saraakiil ka tirsan wasaaradda Arrimaha Dibedda iyo FBI-da oo gacan siinaya ciidamada amaanka ee Uganda ee ku hawlan baaritaanada weeraradii ba’naa ee 11ka July ka dhacey magaalada caasimadda ah ee Kampala.